Njengamanje indathane nengangibajwayele nabangane zokuxhumana, inethiwekhi yayo othintana lochwepheshe kusivumela ukuxazulula imisebenzi eminingi ebalulekile ngokushesha. Ngo ukuxhumana nomphakathi nsukuzonke kukhona isibalo esingapheliyo imisebenzi ehlobene exchange kolwazi, sivumele abasebenzisi ngiwufeze ngesikhathi wonke imicimbi eminingi. Indlela yokwenza abangane ngaphezulu, "VKontakte", "Facebook", "Ofunda nabo", "Umhlaba wami", "Twitter"? Ukuze ukwakha inethiwekhi yakho yothintana nabo, kufanele ube nabo ubungane. Njengoba isizathu singakwazi ukuthatha search abangane ngenzalo. Phela, ukuze uxhumane nabantu ukuthi banemibono ezivamile, kulula ngokwanele.
Kanjani ukwenza okwengeziwe "VKontakte" abangani okudingeka uyenze?
Ezenhlalo athandwayo "VKontakte" inethiwekhi evumela abasebenzisi bayo ukuba inani elikhulu link. Kukhona ezinye imiphakathi lapho abantu bayozinikela njengoba abangane okuxhumana, ukusekela amaphrojekthi, ukukhuthaza imiqondo. Kulezi imiphakathi ongema njengoba nembangi indima nezinye. Isimiso UKUBAMBISANA: ingabe ukusekela amaphrojekthi zabantu ohlwini loxhumana nabo, futhi eyakho. Impendulo eminingi umbuzo zendlela yokwenza abangane ngaphezulu "VKontakte" yilena elandelayo: ukujoyina umphakathi "Engeza Abangane" futhi bandise kwesiyingi kubangane bakhe. Ungakhohlwa ukwabelana nabo imiyalezo futhi uhlole emakhasini ukuze unqume uma kungaba wusizo nomunye iyiphi mkhakha womsebenzi. Ukungeza omunye kungaba ngokushesha uxhumane uhlu ezifanele: abangane, esisebenza nabo, nabangane eyunivesithi. Abeza nje inombolo, ungakwazi ushiye ngaphandle uhlu. Uhlu ezinkulu contact ekuxhumaneni nomphakathi kuzosiza ukuthuthukisa ibhizinisi lakho. Ngokwesibonelo, une esitolo inthanethi futhi udala iqembu yokuxhumana ukunyuswa yayo. Sesha abangani, "VKontakte" - ukuheha inqwaba abathengi, njengoba iziphakamiso ngokubamba iqhaza maningi amathuba okuba basabele iyiphi iphrojekthi ungubani yakho ohlwini abangane. Inethiwekhi ebanzi nengangibajwayele, kunamathuba amaningi okuthi ukuvakashela esitolo sabo ku-inthanethi ukuthengwa kwezimpahla. Ukuthuthukisa iwebhusayithi yakho kokuba nabangane abaningi zokuxhumana nabantu kuyadingeka, izonikeza nohide izivakashi.
kuyoba okwanele ukubeka isixhumanisi isimo impahla onentshisekelo, futhi ucele abangane bakho ukukusiza ukukhuthazwa yayo, ukubeka ulwazi odongeni. Khona-ke le site uzoba simo esihle. Okubalulekile, ungakhohlwa ukugcwala ukuphila kwakho ngolwazi ezithakazelisayo futhi wabelane impahla nabangani.
imibono Okunye sendlela yokwenza abangane ngaphezulu "VKontakte"
Kunezinye izindlela ubuyise ohlwini loxhumana nabo. Qoqa abangane bakho, ungasebenzisa amawebhusayithi ekhethekile kukhona kwi-inthanethi. Odinga ukubhalisa futhi ukwenza imisebenzi ethile, futhi ukubuya ungenza ikhasi lakho ethandwa. Ngenxa yalokhu uzoqala ekwelapheni abantu abane isiphakamiso wengeze njengomngani. Ngakho ukuqoqa inani elidingekayo kwezicelo ukuthi ingase ikhishwe esikhathini esizayo ukusebenzisa njengoba kudingeka.
Indlela ukufaka isithombe in the "Ofunda nabo" ingxoxo enhle,
Ilya Aleksandrovich Varlamov: Biography, amaqiniso okuphila
Lizobakt - yokusetshenziswa
Isenzakalo esidume kunazo zonke imihlola - ungubani?
Nezimfihlakalo ifilosofi: kwencazelo abamele. Nezimfihlakalo - kuyinto ...
Amaconsi "a-Notta": imiyalo yokusetshenziswa kanye nempendulo
Easy Muffin iresiphi kanye kefir
Garden Chrysanthemums babe umhlobiso ezimibalabala ekwindla
Umsebenzi njengoba isihloko Umthetho woMnyango